Indlu encane yangasese yaseKigali edolobheni eduze kwedolobha - I-Airbnb
Indlu encane yangasese yaseKigali edolobheni eduze kwedolobha
52 okushiwo abanye
Kigali, Kigali City, i-Rwanda
Indlu encane ibungazwe ngu-Benjamin
Indlu encane ethokomele yangasese ethandekayo enegumbi lokushiya, umbhede ophindwe kabili e-mezzanine, igumbi lokugezela elilodwa, indlu yangasese eyodwa ehlukile (ikhishi liyingxenye yendlu enkulu engamamitha angama-30 phezulu nefriji lakho).
Ingadi yangasese enkulu nethandekayo etholakala endaweni eluhlaza okotshani enethala eliphumuzayo.
Le ndlu itholakala e-Kiyovu, indawo engumakhelwane wendlu kaMongameli, indawo ethule kakhulu futhi ephephile emaminithini angu-5 ukusuka edolobheni (eduze kakhulu nehhotela laseSerena kanye neMarriott).
Kunikezwe amathawula namashidi ombhede.
I-WIFI esheshayo (i-fiber) iyatholakala endlini encane nasengadini
Ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza kungahlelwa njengesidlo sasekuseni kanye nesifundo sangasese se-yoga (izindleko ezengeziwe).
4.77 out of 5 stars from 52 reviews
4.77 · 52 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-52
Indlu encane iseduze nendawo ehlala uMongameli. Kuthule kakhulu futhi kuphephile. Ungakhohlwa ukuthi iRwanda iyizwe lesi-7 eliphephe kakhulu emhlabeni futhi iyizwe lesi-5 eliphephe kakhulu ukuhamba ebusuku emhlabeni.
Siseduze kakhulu namahhotela e-Serena ne-Marriott (uhambo lwemizuzu engu-5) kanye nendawo yokudlela enhle, i-New Captus (uhambo lwamaminithi angu-5). Sikude ngemizuzu engu-5-8 (ngemoto noma ngemoto) sisuka eKimihurura ngezindawo zokudlela eziningi nokukhetha kuzo.
Siseduze kakhulu nedolobha elizansi (3' ngemoto) futhi sikumaminithi angu-8 kuya kwangu-12 ukuya e-Kigali Conference Centre (KCC) ngemoto noma ngemoto.
Indlu ise-Kiyovu, enye yezindawo eziluhlaza, ezithule futhi eziphephe kunazo zonke e-Kigali.
Ujoyine ngo-Okthoba 2014
Wonke umuntu ukhuluma isiNgisi nesiFulentshi
Hlola ezinye izinketho ezise- Kigali namaphethelo